MURTI-GABAY OO KU SAABSAN MIDNIMO IYO WADASHAQAYN | Faafan News
MURTI-GABAY OO KU SAABSAN MIDNIMO IYO WADASHAQAYN
August 7, 2016 | Filed under: CIYAARAHA | Posted by: admin
Af-Soomaaliga waxaa ka buuxa murti iyo falsafado cilmi ku dhisan. Laakiin, looma fahmin sidii ay ahaayeen. Sababtoo ah ma danaynno luqadeenna. haddii la fahmi lahaa oo la dabbakhi lahaa murtidaas Soomaalidu waa hore ayey horay u mari lahayd.
sababtoo ah, qof walba oo Af-Soomaaliga yaqaannaa ma fasiri karo ama ma macnayn karo heerka iyo baaxadda ay leedahay murti waliba ee xeel-dheerayaal luqadeed ayaa loo baahan yahay.
Haddii ayan saas ahayn luqad walba loogama-maarmi-waayeen khubaro ku xeel dheer.
Taasi waa dhalliil aynnu leenahay oo wadaagno, haddaynnu nahay Soomaali, hadda waana u dhutinnay ee ogoow.
Murtida an ku eegaynno casharkeenna maanta waa tix-gabay oo gaaban oo ku jirta gabay u waa hore tiriyey nin Soomaaliyeed, Alle ha u naxariistee. Tixdiina waa sidaan soo socota:
> TABANTAABADAY LABO GACMOOD TAMAR KU YEESHAANE
> TISKA WAXA LA QAADAA MARKII AY TIIRISAA BIDIXE
> HADDAY MIDIBTU KALI TAAGAN TAHAY TAHAR MA GOYSEENE
Murtdaas gaabani waxay ka mid tahay falsafadaha dahabka iyo macdanta ka qaalisan oo loo fasri waayey, dabadeedna lagu abaabuliu waayeey laguna hoggaamin waayey. Run ahaantii waa jiraan waligeedna waa jireen dad badan oo fahmayey ama yaqaan macnaha dhabta ah iyo salka murtida, laakiin haddee yaa ju’ ka yiri ama ku abaabuley oo baray dadkeenna.
Sababta arrintaas keentay waa: 1) iyadoo aynnaan wali gaarin fasiridda, dhuuxidda/maalidda iyo ku dhaqanka luqadeenna, 2) iyo murtidoo si u daboolan, taasoo leh macne soke oo fudud, kaasoo dad badan ka qarin kara macnaha weyn oo u ujeedey gabyaagu, Alle ha u naxariistee.
1) Tiska waxa la qaadaa (oodda/dhacanta waxaa la qaadi karaa) markay tiirisaa bidixe (bidixdu kaalmayso), hadday midigtu – macnihii muuqdey oo qariyey kii kan hoose oo weyn oo dhabta iyo dantii/dulucdii murtida ahaa:
2) Waa awoodda oo dhan la isu geeyo, si loo qaado culayska ama si loo xalliyo dhibta. Waxa lala hadlayo iyo wax loo xallinayaaba waa dad ay bulshadu ka kooban tahay.
3) Ku sii dar oo soo saar wali murti an muuqan oo hoos ku sii duugan baa ka mid ah murtidee.